ကမ္ဘာစေတနာ အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် တရုတ် သတ်မှတ်ခံရ | Buzzy
ကမ္ဘာစေတနာ အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် တရုတ် သတ်မှတ်ခံရ
အလှူအတန်းရက်ရောမှုမှာ မြန်မာက ပထမပါ
၂၀၁၆ ခုနှစ်ရဲ. လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်းတွေ ထွက်လာပြီးနောက်မှာ စစ်တမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ မှာ တရုတ်နိုင်ငံက အဆင့် ၁၄၀ နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ရှိနေတာပါ။
၂၀၁၆ ခုနှဈရဲ. လူမှုရေး အဖှဲ့အစညျးတှကေို လှူဒါနျးမှုမှတျတမျးတှေ ထှကျလာပွီးနောကျမှာ စဈတမျးမှာ ပါဝငျတဲ့ နိုငျငံပေါငျး ၁၄၀ မှာ တရုတျနိုငျငံက အဆငျ့ ၁၄၀ နဲ့ နောကျဆုံးမှာ ရှိနတောပါ။
လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းက နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ က လူပေါင်း ၁၀၀၀ လောက်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လက စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာပါ။ ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကနေ တရုတ်နိုင်ငံက ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေဟာ သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လက လူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကို ကူညီခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ အခြားသော အီရတ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင် လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ကူညီမှုနှုန်းဟာ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိနေတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ရမှာပါ။
လူမှုကယျဆယျရေး အဖှဲ့အစညျးက နိုငျငံပေါငျး ၁၄၀ က လူပေါငျး ၁၀၀၀ လောကျကို ပွီးခဲ့တဲ့လက စဈတမျးကောကျယူခဲ့တာပါ။ ဒီစဈတမျးကောကျယူမှုကနေ တရုတျနိုငျငံက ၂၄ ရာခိုငျနှုနျးသော လူတှဟော သူတို့ဟာပွီးခဲ့တဲ့လက လူစိမျးတဈယောကျယောကျကို ကူညီခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ ။ အခွားသော အီရတျလိုနိုငျငံမြိုးမှာတောငျ လူစိမျးတဈယောကျကို ကူညီမှုနှုနျးဟာ ၈၁ ရာခိုငျနှုနျးထိ ရှိနတောနဲ့ နှိုငျးယှဉျ သုံးသပျရမှာပါ။
ဒီအောက်က စာရင်းကတော့ ကမ္ဘာမှာ လှူဒါန်းမှု အများဆုံးသော နိုင်ငံ ဆယ်ခုစာရင်းပါ